Famindran-toerana Nitokona ireo mpivarotra tetsy Ambodin'Isotry
Tsy manaiky ny hifindra toerana eny Bekiraro, izay tsy lavitra azy ireo ny mpivarotra amoron-dalana etsy Ambodin’Isotry.
Tsy maintsy tohizana anefa ny asa fanadiovan-tanàna sy ny fanarahan-dalàna, hoy ny avy eo anivon'ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Anisany ny fanalana azy ireo, izay tsy alana manta fotsiny akory fa efa misy ny toerana nomena azy ireo mba hivarotany. Nilaza moa ireo mpivarotra fa tsy hanaiky hatramin’ny farany. Noho ny tsy fisian’ny mpividy eny Bekiraro no voalaza fa anton’ny fandavana. Andrasana izay fanapahan-kevitry ny kaominina Antananarivo Renivohitra mikasika azy ireo. Ireo olona mandalo dia miantsena moa amin’ny ankapobeny no tena handrandrain’ireo mpivarotra amoron-dalana hanodina ny fiainany isan’andro tombony izay tsy hitan’ireo mpivarotra any anaty tsena.